कस्तो रहला त तपाइँको आजको दिन, हेर्नुहोस् आज वैशाख २८ गते शनिबारको राशिफल ! - PUBLICAAWAJ
कस्तो रहला त तपाइँको आजको दिन, हेर्नुहोस् आज वैशाख २८ गते शनिबारको राशिफल !
प्रकाशित : शुक्रबार, बैशाख २७, २०७६१७:२८ पब्लिक आवाज / संवाददाता , अम्बिका
वि.सं. २०७६ साल वैशाख २८ गते। शनिबार। इश्वी सन् २०१९ मे ११ तारिख। शकसंवत् १९४१। परिधावी संवत्सर। उत्तरायण। वसन्त ऋतु। नेपाल संवत् ११३९ बछलाथ्व। वैशाख शुक्लपक्ष। तिथि– सप्तमी, १९:१५ बजेउप्रान्त अष्टमी। नक्षत्र– तिष्य, १३:०६ बजेउप्रान्त अश्लेषा। योग– गण्ड, १४:०२ बजेउप्रान्त वृद्धि। करण– गर, ८:२५ बजेदेखि वणिज, १९:१५ बजेउप्रान्त भद्रा। आनन्दादिमा मित्र योग। चन्द्रराशि– कर्कट। काठमाडौंमा सूर्योदय– ५:२० बजे, सूर्यास्त– १८:४२ बजे र दिनमान ३३ घडी २६ पला। गंगोत्पत्ति, गंगा सप्तमी।
आजको पुरै दिन मानसिक चिन्ताले सताउनेछ । भावनाको अधिक प्रभाव रहनेछ । वाणीमा संयम नरहँदा ग्लानीको अनुभव हुन सक्दछ । माताको स्वास्थ्यमा अधिक ध्यान राख्नु होला । स्थावर सम्पतिसंग सम्बन्धित चर्चालाई स्थगित गर्नु नै उचित हुनेछ । जलाशयबाट टाढा रहनु होला ।
तन मनबाट हल्कापनको अनुभव गर्नु हुनेछ । उत्साहमा वृद्धि हुनेछ । मन संबेदनशिलताले भरिपूर्ण रहनेछ । कल्पनाशक्तिमा वृद्धि हुने हुँदा काल्पनिक दुनियाको आनन्द उठाउन सक्नु हुनेछ । पारिवारिक विषयमा रुची हुनेछ । प्रवासको आयोजना हुन सक्दछ । रुचिकर भोजन सुख प्राप्त हुनेछ ।
कार्य सम्पन्नमा बिलम्ब हुन सक्दछ । प्रयास जारी राख्नु होला । यसो गर्दा तपाइँको कार्य निर्धारित रुपमा सम्पन्न हुनेछ । आर्थिक आयोजनामा प्रारम्भमा केही वाधा आए पनि पछी मार्ग खुल्नेछ । नोकरी तथा व्यवसायिक स्थलमा सहकर्मी संगको वातावरण राम्रो रहनेछ ।
मित्र तथा स्नेहीजनको साथ उल्लासमय वातावरणमा दिन बित्नेछ । प्रवास या यात्राको सम्भावना रहेको छ । सुरुचिपूर्ण भोजनको स्वाद लिन सक्नु हुनेछ । आर्थिक लाभको दिन छ ।
अधिक भावुकताको कारण मन चिन्तित रहनेछ । स्त्रीवर्गबाट सम्हालिएर रहनु होला । दलीलबाजी या चर्चा, विवादबाट बच्नु होला । कोर्टको मामलामा सावधानीपूर्वक रहनु होला । व्यवहारमा संयम र विवेक राख्नु होला । अधिक खर्च हुनेछ ।
आजको दिन आनन्द उल्लासमा बित्नेछ । आज तपाईलाई विविध क्षेत्रमा लाभ मिल्नेछ । स्त्री मित्रको महत्वपूर्ण भूमिका रहनेछ । मित्रको साथ सुन्दर, मनोहर स्थलको आयोजन गर्न सक्नु हुनेछ । सन्तानको शुभ समाचार मिल्नेछ ।
आजको दिन तपाइँको लागी शुभ रहनेछ । नोकरी या व्यवसायिक क्षेत्रमा अनुकुल वातावरण रहनेछ । शिर्ष अधिकारीहरुको साथ महत्वपूर्ण चर्चा हुनेछ । पदोन्नतिको सम्भावना छ । पारिवारिक जीवनमा प्रफुल्लित वातावरण रहनेछ । माताको तर्फबाट लाभ हुनेछ ।
नोकरी तथा व्यावसायिक स्थलमा सम्हालिएर कार्य गर्नु होला । शारीरिक रुपमा आलाश्यको अनुभव हुनेछ । सन्तानको साथ मतभेद रहनेछ । सम्भवत महत्वपूर्ण निर्णयलाई स्थगित गर्नु होला । खर्चको सम्भावना छ । छोटो प्रवासको आयोजना हुनेछ ।
आज कुनै पनि कार्यको प्रारम्भ गर्नु होला । बिरामीको उपचारको प्रारम्भ पनि नगर्नु होला । अनैतिक सम्बन्ध र निषेधात्मक कार्यबाट टाढा रहनु होला । इश्वरको ध्यान योग आराधनाले मन शान्त रहनेछ ।
आजको दिन शुभ बित्नेछ । व्यावसायिक क्षेत्रमा व्यापार विकशित हुने सम्भावना छ । दलाली, कमिशन, ब्याज आदिको आयमा वृद्धि हुनेछ । आर्थिक स्तर बलियो हुनेछ । मान-प्रतिष्ठामा वृद्धि हुनेछ ।
आज तपाइँको दिन आनन्ददायी रहनेछ । कार्यमा सफलता, यश-कीर्ति प्राप्त हुनेछ । परिवारजनको साथ राम्रो दिन बित्नेछ । नोकरी र व्यवसायिक क्षेत्रमा सहकर्मीको सहयोग मिल्नेछ । घरमा आनन्दपूर्ण वातावरण रहनेछ । शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्य राम्रो रहनेछ ।
आज तपाइँको सृजनशक्तिमा अधिक निकार आउनेछ । कल्पनाशक्तिको कारण साहित्य क्षेत्रमा विशेष रुची रहनेछ । विद्यार्थीको लागी निकै अनुकुल समय छ । स्वभावमा विशेष मात्रामा भावुकता रहनेछ ।
कस्तो रहला त तपाइँको आजको दिन, हेर्नुहोस् आज असोज ११ गतेको राशिफल
कस्तो रहला त तपाइँको आजको दिन, हेर्नुहोस् आज कार्तिक १९ गतेको राशिफल
कस्तो रहला तपाइँको आजको दिन, हेर्नुहोस् आज भदौ ३ ,मंगलबारको राशिफल !
कस्तो रहला त तपाइँको आजको दिन, हेर्नुहोस् आज असोज १६ गतेको राशिफल
कस्तो रहला त तपाइँको आजको दिन, हेर्नुहोस् आज जेठ १ गते बुधबारको राशिफल !
कस्तो रहला तपाइँको आजको दिन, हेर्नुहोस् आज साउन ६ गते सोमबारको राशिफल !